Service yedu yaita zvishamiso zvakawanda
CMOAPI inogona kupa masevhisi anotevera, ese ayo anotsigirwa nemitemo yedu yakasimba mukudzivirirwa Kwepfungwa (IP), kuve nechokwadi kuti mapurojekiti anoitwa mukutenda kwakasimba nguva dzose. Synthetic nzira yekuvandudza Prize optimization process kukwirira kubva kumagiramu kuenda kuMetric Tons Exclusivity kana zvichidikanwa Tsigiro yakazara yekutsvagisa kusanganisira HPLC, GC-MS uye NMR FTE rebasa Kune zvigadzirwa uko maitiro ekugadzira atove aripo, CMOAPI inogona kupa chibvumirano uye kubhadhara mabasa ekugadzira kune kutaurwa kwevatengi. Pamusoro pemasevhisi ataurwa pamusoro, tinopawo nyanzvi yekubika basa rekubhadhara (pasina imwe muripo) kuona kuti, pese pazvinogoneka, tinoshandisa chete zvinyorwa zvemhando yepamusoro pamitengo yemusika inokwikwidza. CMOAPI inokwanisawo kupa tsika yekutsvagiridza uye basa rekuvandudza rakaenderana nezvinodiwa nevatengi. Isu tine yakanakisa track rekodhi yekugadzirisa yakaoma organic synthesis zvinetso zvevatengi vedu uye mapurojekiti anogona kuve akavakirwa pazere-yakazara nguva yakaenzana (FTE) kana mitengo yezuva nezuva. Bata isu kuti uone kuti yedu yakanyanya-nyanzvi R & D timu inogona kuita yako inotevera chirongwa kubudirira kwedu kwazvino.
Kwemakore gumi apfuura, CMOAPI yanga ichipa yakasarudzika tsika yekudyidzana uye mabasa ekugadzira. Yedu yekushumirwa ngazi inogona kubva kumamigigamu kadiki diki kusvika pamatani ezvikuru zvekugadzira mabasa. Ruzhinji rwevatengi vedu rwunowanikwa kuNorth America, Europe, Aisa, kusanganisira Pfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer uye imwe yakakurumbira kambani. Zvese zvetsika yedu yekufungidzira uye yekugadzira masevhisi inoitwa pasi pemamiriro ekuvanzika kwakasimba. Zvikwata zvedu zveprojekiti zvakabatanidzwa zvinotsigirwa neboka rine ruzivo rwakakura uye rakazvipira veairesi-kumusoro. Kushanda nemaerekitoreji zvine tembiricha yekudziya kubva -100˚C kusvika 300˚C, uye zviyero zvinotangira pa5L kusvika pa5000L, kukosha kunoendeswa kune vatengi nekugona kwakapindirana-mukati meimba fungidziro yepakati yepakati (kusvika metric ton yakawanda) uye inoshanda mishonga yezvipenga. Kugadzira kunoitwa mune yedu yakazara-yevaridzi yekugadzira nzvimbo. Isu tinogadzirisa ketani yekugovera yekugadzirwa kemisitimu kusangana neyako chaiyo purojekiti zvinounzwa nekumhanya kwakanyanya uye mutengo uchisangana nemhando yepamusoro yekuchengetedza kuchengetedza uye inotevedza kutevedza. Optimised kugadzirwa maitiro anotendera anoshandurwa batch saizi uye yakagadziridzwa chigadzirwa mhando. Maitiro ese akagadzirwa kuti asangane nemitemo yakasimba.
CMOAPI yeDhishuwa Discovery is Cloud-based, cuffitive solution inoongorora ruzivo nesainzi uye data kuburitsa zvakazivikanwa uye zvakavanzika zvinobatana izvo zvinogona kubatsira kuwedzera mikana yekubudirira kwesainzi. Iyi ipuratifomu inobvumira vaongorori kuti vagone kuumba mitsva nekubatsirwa kwekuona kwakasimba, humbowo hwakadzoserwa uye kufungidzirwa kwemitauro yakasikwa yakadzidziswa mune yehupenyu sainzi domain. CMOAPI yeDhiza Discovery inogona kumhanyisa kuzivikanwa kwevanyowani zvinodhaka vanokamhina uye chinangwa chechinodhaka chine chinangwa nekugadzirisa kugona kwe data rakakura.
Boka redu rekuvandudza chemakemikari, rinoumbwa nemasayansi anopfuura makumi mashanu munyika medu, rinodarika zvinotarisirwa pane zvirongwa zvakanyanya kunetsa. Tichishanda munzvimbo dzepasi-dze-the-art dzimba dzakarongedzerwa neazvino maitiro uye kuongororwa kuchishandiswa, isu tinobudirira kuita nzira yekuongorora, nekukurumidza maitiro ekuvandudza, optimization yemamiriro ekuita kune huwandu-up hwezvinhu zvekuedza preclinical miedzo. Ne rutsigiro kubva kune yedu nyanzvi timu revanoongorora, makemikari injinari uye QA nyanzvi, isu nekukurumidza uye zvinobudirira kukudziridza scalable kugadzira maitiro kuti uite chero chako chaunoda.